नेपाल पाना प्रकाशित: २०७४-१२-६ गते | 6180 पटक हेरिएको
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सर्वप्रथम अत्यधिक बहुमतले प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा बधाई छ । आज तपाई प्रधानमन्त्री भएको करिब एक महिनापछि हामी चार भाईबहिनी तपाईंलाई एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छौँ । तपाईले पत्रपत्रिकाबाट पक्कै पनि खबर सुन्नुभएको हुनुपर्छ, २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित ५ जना प्रहरी र २ जना सशस्त्र प्रहरीको हत्या भएको थियो । त्यही घटनामा एकजना डेढ वर्षे नाबालकले समेत अकाल ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । त्यहाँ हामिलाई संसार देखाउने, धेरै माया गर्नुहुने हाम्रा बाबा प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टको पनि हत्या गरिएको थियो, सोही घटनामा । हामीलाई राजनीति र यस्ता अरू कुराबारे केही थाहा थिएन पहिले, अहिले पनि त्यसबारे ज्यादातर चासो राख्दैनौँ । जब कर्तव्यपालनका सिलसिलामा आपराधिक समूहद्वारा प्रहरीको निर्मम हत्या गरियो, हाम्री आमाको सिन्दुर पुछियो र हामीलाई टुहुरा बनाइयो– हामी यति विक्षिप्त भयौँ कि कयौँ दिनसम्म हामीलाइ केहीथाहा भएन, के भइरहेको छ । भनौँ न हामी अँध्यारो सुरुङभित्र पसेझैँ भयौँ । केही पनि देखेनौँ अगाडिको बाटो ।
निकैपछि मात्रै थाहा भयो– हाम्रा बुबालाई आन्दोलनकारीले हत्या गरेका रहेछन्, उहाँका सहकर्मीहरुसँगै । देश र जनताको सुरक्षमा खटिएका प्रहरीलाई भाला बन्जरोले हानेर मारे त कतिलाइ जीउँदै जलाइयो भनेर सुनेपछि उत्पन्न मुटुको जलन अहिलेसम्म सेलाएको छैन । त्यतिबेला सरकार र सबै पक्षबाट धेरै सान्त्वना प्राप्त भयो । हामीलाई टुहुरा बनाउने अपराधीहरूलाई कारवाही हुने र उनीहरू जेल जानेपछि राहत मिलेको अनुभूत भएको थियो हामीलाई ।
त्यो अपराधमा संलग्नहरूको नाम समेत खुलेपछि र घटनामा संलग्न केहीपक्राउ परेपछि हामीमा आशा अङ्कुरण भएकै हो– ढिलोचाँडो न्याय पाउँछौँ । पिताको आत्माले शान्ति पाउने भयो अब । तर हाम्रो आशा सत्य सावित कहाँ हुन्थ्यो र ! अभियुक्तहरूमध्ये धेरै जना पक्राउ नै परेनन । त्यसपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई कारवाही गरेर न्याय दिलाउने आश्वासन त बाँडे तर अदालतको कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा कसैले भारतमा लुकेर बसेका मुख्य अभियुक्तलाई नै सार्वजनिक स्थलमै भेटेर हाम्रो घाउमा नुनचूक दले ।
हामीले समाचारमा सुनेका छौँ र छानबिन समितिले छानबिन गरे अनुसार हाम्रा पितालाइ मार्न मुख्य योजना बनाउने मध्येको प्रमुख मान्छेले तपाईंले जस्तै भोट पाएर चुनाव जितेको छ रे ! त्यसरी घरघर भोट माग्न जाँदापनि पुलिसले किन पक्राउ गरेन ? आज हामी यो मात्र हैन हामी धेरै प्रश्न गर्न चाहन्छौँ तपाईंलाई । अनि त्यसरी अभियुक्त मान्छेलाइ बचाउन किन खोजिरहनुभएको छ ? उसलाई पनि सरकारको मन्त्री बनाउन खोज्नुभएको हो कि ? अपराधीलाई सांसद् प्रहरी बनाएर कस्तो सुशासनको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं ?
प्रधानमन्त्री ज्यू ! हामी हाम्रो पिता नभएको परिवारमा कसरी बसेका छौँ ?? बुबा नहुनेले समाजले हामिलाइ हेर्ने नजर कस्तो छ यो तपाईं सोच्न पनि सक्नुहुन्न । तपाईं या अरू कसैले पनि हाम्रा दिवंगत पिता फिर्ता ल्याइदिन त सक्नुहुन्न तर हामीलाई टुहुरो बनाउने ती अपराधीहरूलाई सजाय दिएर हामीलाई न्याय दिन त सक्न सक्नुहुन्छ नि ।
हामी पिता गुमाएको पीडा त कसरी भुल्न सक्थ्यौं र तैपनि ती अपराधीहरूलाई सजाय भयो भने कम्तीमा न्याय मिलेको महसुस त हुनेथियो । र भोलि फेरि हामीजस्तै असहाय बालबालिकाहरूलाई कसैले टुहुरा बनाउने धृष्टता त गर्न सक्दैनथ्यो नि उसले ।
सरकारले हत्या–आरोपमा खोजी गरिरहेको मान्छेलाई राजनीतिको आवरणमा जोगाएर कसैले उसलाई जोगाउन चाहन्छ भने भगवानले उसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् । अझै पनि न्यायको आशा छ । त्यो नरसंहारको एकजना मुख्य अभियुक्त अझै पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छ रे । कुनैपनि बाहनामा उसलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको हामीलाई थप अन्याय गर्नु हो । यसरी पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउनुले हामीले राज्यबाट के आशा गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?
हाम्रा निर्दोष बुबाको छातीमा भाला र गोली प्रहार गर्ने÷गर्न लगाउने लाई कारवाही भएन भनेपीडित परिवारमाथि घोर अन्याय हुनेछ । हामी न त आरामले सुत्न सक्ने छौँ न त मनमा शान्ति नै हुनेछ । न्याय पाइएन भने शायद टीकापुर घटनाको नियति दोहरिनेछ र हामी जस्तै अरूले पनि टुहुरो हुनु पर्नेछ ।
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको व्यक्तिलाई जेलभित्रै शपथ खुवाउने सरकारको आश्वासन र अनसन टुटाउन गृहमन्त्रीज्यूले जुस पिलाउँदा हामी विष पिएर सरह प्रताडित छौँ । हामी निराश मात्र हैन प्रधानमन्त्रीज्यू, लज्जित पनि भएका छौँ । राज्यले हामी पीडितभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पनि त्यही पीडकले पाएको छ भन्ने पनि शायद यहाँलाई अवगत नै छ होला । सान्तवना, संरक्षण, राज्यको स्नेह पनि पीडकले पीडितभन्दा बढी पाएको छ ।
यहि थिति बसाल्ने हो र यसैका लागि तपाईंको आफ्नो पनि आजन्म संघर्ष थियो भने हामी असहायको भन्नु केही छैन । अहिले अपराधीका गोहीका आँसु र उसको राजनीतिको पाखण्डले तपाईं गल्नुहुन्छ भने तपाईंको अभिवावकत्वमा रहेको राज्यले के अनभूति गर्ने ?अपराधीहरुले हामीबाटहाम्रा बुवा गुमाएकोलामो समयभईसक्दा पनि चौबिसै घण्टा आँसुु बगाइरहेका छौँ, हामीले के आशा गर्ने ? हाम्रो आँसुको पनि मूल्य छ र निष्ठा–नैतीकताको पनि स्थान हुन्छ भने तुरुन्तै टीकापुर घटनाको योजना बुन्ने र हाम्रा पिताको विभत्स हत्या गर्नेलाई आजन्म कारावासको सजाय होस् ।
प्रधानमन्त्र ज्यू यो पत्र तपाईसम्म त पुग्छ पुग्दैन । हामी राजनीति र समाचार जान्ने÷बुझ्ने अवस्थाका पनि छैनौँ । यी शब्दहरु हाम्रा आँसु आशा दुवै हुन् । सम्माननीयज्यूलाई हामी धन्यवाद भनेर यसरी नै पत्र लेख्नेछौँ, जुन दिन हामी न्याय पाएको अनुभुति गर्नेछौँ । धन्यवाद ।
स्वर्गीय पिताको स्मृति र न्यायको आशमा रहेकि छोरी :-वसन्ती विष्ट